Shir madaxeedka dhaqaalaha Carabta oo Beyruut ka furmay - Halbeeg News
Shir madaxeedka dhaqaalaha Carabta oo Beyruut ka furmay
Sawir hore: Amiirka Qadar, Sheikh Tamiim Bin Xamaad Bin Khaliifa Al-Thani, xilli uu ka hadlayay shirkii Doxa 15-kii Diseembar 2018. Xuquuqda sawirka Qatar News Agency/REUTERS
BEIRUT (HALBEEG)- Waxaa magaalada Beyruut ee dalka Lubnaan maata si rasmi ah uga fumay shir looga hadlayo arrimaha dhaqaalaha dalalka carabta oo aan muddo lix ah qabsoomin.
Waxaa xusid mudan in amiirka Qadar ee madasha ku sugan uu dhawaan ku gacan seyray martiqaad dowladda Sucuudiga u fidisay kaasoo la doonayay in uu uga qeyb galo shir madaxeed dalalka gacanka, taasi badalkeedana uu amiirku u diray shiraakaas in uu ka qeyb galo wasiirkiisa arrimaha dibadda maadaama khilaaf xooggan uu kala dhexeeyo qaar ka mid ah dowladaha ku bahoobay golaha iskaashiga dalalka gacanka.
Ka qeybgalka amiirka Qadar ee shirka Beyruut ayaa jawaab u ah ka maqnaashaha shirka ay ka maqanyihiin dalalka Sucuudiga, Imaaraatka, Baxreyn iyo kuwo kale oo horay xariirkii diblomaasiyeed iyo midkii ganacsiba ugu jaray dalkiisa.
Madaxweynaha Soomaaliya maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka mid ahaa madaxdii ku casuunneyd shirka Beyruut ayaa ka baaqday shirka waxaana ku matali doona wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad iyo wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo odayaaaha Koonfur Galbeed ka codsaday iney maamulka la shaqeeyaan
Itoobiya: Waxaa naga go'an inaan wiiqno awoodda Al-shabaab